မှတ်ချက်ကလေး ပေးစေချင် Captions | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မှတ်ချက်ကလေး ပေးစေချင် Captions
မှတ်ချက်ကလေး ပေးစေချင် Captions
Posted by Ma Ma on Aug 16, 2013 in Community & Society, Creative Writing | 17 comments
အမှိုက်ပုံး ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကားမောင်းသွားရင်းတွေ့လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုပါ။
What captions for this picture?
Caption => “တာဝံအရ”
ဖြေတာ မှန်မမှန် ပြောဦးနော်…
စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေး မကောင်းဘူးလို့ အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက တာမွေ နားမှာ အဲ့လိုပဲတွေ့လို ရိုက်လိုက်မိသေးတယ်။
အတွေးအခေါ်တွေ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ ဘဝ တွေ ကို ရိုးသားဖြူစင်ပါတယ်လို့ အဓိပါယ်တွေ ဖွင့်နေသမျှ။ စဉ်းစားတိုင်းမွမ်းကြပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
အိုက်လို မြင်ကွင်းမျိုး မကြာခဏ တွေ့ မိဖူးတယ်
ပြည်လမ်းမှာ ဖြတ်သန်းသွားလာနေရသူမို့ . . .
No Strength to Comment
ပေးဆိုရင်တော့ ဟို စကားပုံ ကို ပြောင်းမယ်။
အဲဒါ အမှိုက်ပုန်း တွေ ဆေးနေတာလား။
“သတိ – အလုပ်လုပ်နေသည်”
မြို့တော်သန့်ရှင်းလှပရေးအတွက် အမှိုက်ပုံးကြီးတော့ နေရာတိုင်းမှာ ချထားတာ အီတုန်းပိုစ့်တစ်ခုတင်ပြီး ပြောဖူးပါတယ်။
သိပ်မကြာခင် အဲဒီအမှိုက်ပုံးကြီး အခိုးခံရတာလည်း ပါတယ်။
အဲဒီလို အမှိုက်ပုံးတွေ နေရာအနှံ့မှာ ချထားပေးပေမယ့်…..
လူထုက အမှိုက်ကို စည်းကမ်းတကျ စွန့်ပစ်မှု အင်မတန်အားနည်းပါသေးတယ်။
စည်းမရှိ ကမ်းမရှိစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ အလေ့အကျင့်ကြောင့်လို့ ပြောလို့ရသလို…
ဥပဒေအရအရေးယူမှု မရှိလို့ လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။
အမှိုက်ပစ်ဖို့ အမှိုက်ပုံးအဖုံးကို ဖွင့်ရကိုင်ရမှာ ရွံတာကြောင့်ဆိုတာလည်း ပါပါတယ်။
အခုမြင်ကွင်းက လမ်းဘေးမှာ ချထားတဲ့ အမှိုက်ပုံးကို အမှိုက်တွေထုတ်ပြီး စည်ပင်ဝန်ထမ်း၂ယောက် စကားတပြောပြောနဲ့ အားရပါးရ ဆေးနေကြတာပါ။
အဲဒီမြင်ကွင်းကို မြင်ပြီး အတွေးတွေ ရောင်စုံသွားတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းများရဲ့ အမှိုက်ပုံးကို ချထားပေးရုံတင်မဟုတ်ပဲ သန့်ရှင်းရေးပါလုပ်ပေးတဲ့ တိုးတက်မှုကို လက်ခုပ်တီးပေးချင်တယ်။
အမှိုက်ပုံးကို သန့်ရှင်းအောင် မရွံမရာ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးနေရတဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်း ၂ယောက်ကို သနားမိတယ်။
ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို စိတ်ပါလက်ပါ (တာဝန်ကျေမဟုတ်) အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးမိတယ်။
မြို့နေလူထုကို တထောင့်တနေရာကနေ အားပေးကူညီတဲ့အနေနဲ့ အမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်စေချင်မိတယ်။
စနစ်တကျ အမှိုက်စွန့်ပစ်အောင် ဒီပုံလေးနဲ့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ချင်ပါတယ်။
မှတ်တိုင်နားက အမှိုက်ကန်( အုတ်ကန် ) ကိုလည်း
မနက်က အမှိုက်တွေ အပြင်ထုတ် ( သိမ်းတဲ့ကား မလာသေး၊ မရှိသေး )
ဆေး ( ထုံး ) သုတ်နေကြတာ တွေ့ခဲ့လို့ …
အမှိုက်ကန်တော့ သန့်စေ ရပ်ကွက်တော့ နံစေ ဖြစ်နေပါရော…
အောက်ခြေလူတန်းစား ၊ နေ့စား ဘ၀တွေ …. သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ …. အန်တီ မမရေ
အမှိုက်ပုံးဆေးနေကြသူတွေကိုကြည့်ပြီး … ဘာကြောင့်မှန်းမသိ …အားနာ သလိုဖြစ်မိတယ် ။
အမှိုက်နံ့ ဆိုတာ …. အတော်လေး စိတ်ကို ကသိကအောက်ဖြစ်စေတဲ့အနံ့ မျိုးကိုး … ။
နှာခေါင်းဝနား စူးစူးဝါးဝါးရတာနဲ့တင် မျက်ရည်ဝဲပြီး ပျို့အန်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့ အနံ့မျိုးမို့ … အမှိုက်ပုံနားကဖြတ်တိုင်း ၊ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး မပြေးရုံ လမ်းလျှောက်မိခဲ့တာ … ။ အခုလိုမျိုး အမှိုက်ပုံးကို စိတ်ပါလက်ပါဆေးနေတယ်ဆိုတာ သိရတော့ …. ရင်ထဲတမျိုးပဲ .. ။
လက်အိတ်လေးတွေနဲ့ဆေးခိုင်းတာတော့ … ဖြစ်သင့်ပါတယ် … ။
ဒါပေမယ့် .. လမ်းမမှာဆေးလိုက်တဲ့ ရေတွေက …. ဘယ်ကို လှိမ့်စီးမလဲမသိ … ။
ပိုက်ကြီးနဲ့ ၀ုန်းခနဲဆေးတာ မဟုတ်ဘူး …ပုံးနဲ့ ခပ်ဆေးတာ … ရေပမာဏ မများဘူးကိစ္စမရှိဘူးလို့များ တွေးသလားမသိ … ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် …ဘယ်သူမှ မကိုင်ချင်တဲ့ သိမ်းမထားချင်တဲ့ အမှိုက်ထည့်တဲ့ ပုံးကိုတော့ ဆေးနေကြတယ် … ။
ရပ်ကွက်တွေ ၊ လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာ အမှိုက်ပုံးထားပေးထားပေးတာကို အသိမှတ်ပြုပေမယ့် အမှိုက်ပုံးနဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှု ပမာဏ မမျှတတဲ့ အခြေနေကြောင့် အမှိုက်ပုံးဘေးက မြေကြီးပေါ်မှာ အမှိုက်ထုတ်တွေ အစီရီနဲ့ …. ။ တချို့ကလည်း အမှိုက်အိတ်တောင် မထုတ်နိုင်ဘူး … ငါ့အိမ်က လွတ်လျှင် ပြီးရော တွေးပြီး … ဒီတိုင်းမြေကြီးပေါ်ကို သွန်ချထားပစ်ခဲ့တယ် ..။ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး … ။
အိုက်လောက်အမှိုက်ပုံးကြီးတွေကို အနဲဆုံး လူသုံးယောက်လောက်ဝိုင်းဆေးသင့်ကြောင်းနဲ့
အိုက်ဂလိုသာ နေ့တိုင်းဆေးနေရမယ်ဆို အချိန်ပိုကုန် လူပိုပင်ပန်းမယ်လို့ မြင်မိကြောင်း
စည်ပင်ဝန်ထမ်းတိုးသင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာ အပြည့်အစုံထောက်ပံ့သင့် (လက်အ်ိတ်မပါ
နှာခေါင်းစည်းမပါ လည်ရှည်ဖိနပ်မပါဘဲ အမှိုက်ကျုံးနေကျလို့)
အမှိုက်ပုံးသာမက အမှိုက်ကားပါ Upgrade လုပ်သင့် (အမိုးဖွင့်အမှိုက်ကားနဲ့ မြို့ထဲဖြတ်မောင်း..ပီးရင်
မီးပွိုင့်မှာ အကြာကြီးမိ ဘေးနားက ကားတေအားလုံး မရှုချင်လဲ ရှူ ရှူချင်စိတ်မပေါက်လဲရှူ)
ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့ ပြောရရင် အမှိုက်ကားက နေရာတိုင်းကို မရောက် (ဘာလို့လဲတော့မသိ)..
သများတို့ရုံးမှာ လစဉ်ကြေး ငါးထောင် ပေးပြီး အမှိုက်သိမ်းခိုင်းတာတောင် တပတ်တခါ
မပြောချင်တော့ပါဝူးးး.အဟိ ( ပြောစရာကုန်သလောက်ချိသွားဘီ)
အမှိုက်ကား အမိုးပွင့်ကြီးကို မဆံ့မပြဲတင်ပြီး … မဖုံးအုပ်ပဲ ဂျိမ်းစဘွန်းမောင်းသလို မောင်းလာလိုက .. အမှိုက်ကြဲတဲ့ လမ်းဖြစ်ခဲ့ရတာတွေလည်း ရှိသေးသတော် … ။
မနက်မိုးမလင်းသေးဘူး …. အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းပေါ်က အမှိုက်ပုံကလည်း … ဖြတ်သွားတိုင်းကျက်သရေရှိပါ့အေ … ။
ကမ်းနားလမ်းက အဝေးပြေးမှတ်တိုင်အလွန်မှာလည်း … အပုံလိုက်ကြီး ဟီးဟီးထလို့ … ။
ဒါတင်လားဆိုတော့ … ဗဟိုလမ်းက(နာနတ်တောလမ်းနား) စည်ပင်ရုံးရှေ့မှာလည်း အမှိုက်ကား ခြောက်ကားလောက်အတင်ချ လုပ်နေတယ် … ။ မနက်ပိုင်း ရုံးသွားရင်းဖြတ်သွားရတဲ့ လမ်းတွေက … အမှိုက်ပုံမရှိတဲ့လမ်း မရှိသလောက်ပဲ ..
ဂယ်ဒေါ့စ် … စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ပြီး ..လူတွေ စားနိုင်သောက်နိုင်ဝယ်နိုင်ကြတယ်လို့တော့ .. မုဒိတာ ပွားချင်တာအေ … ခိခိ …
ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးရမယ်တောင်မသိတော့ပါဘူး။ ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းလို့တော့ပြောလို့ရမလားပဲ။ အမှိုက် ကန်အသစ်မို့ဆေးတာလား။ လူကြီးဖြတ်မှာမို့ဆေးတာလား။ အမြဲဆေးမှာလားဆိုတာလေးသိတော့သိချင် သား မမရေ။ အမှိုက်နဲ့ စနစ်ကျမှု့ဟာမြန်မာလူမျိုးတွေအသားတော့မကျသေးတာအမှန်ပါ။ ဒီလိုဆေးနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ အမှိုက်သိမ်းသမားတွေဖြစ်ဖို့များတယ်။ သူတို့အလုပ်ကို ဂုဏ်ယူတ၀င့်လုပ်နေတဲ့ထဲ မှာဒီအမှိုက်သိမ်းသမားတွေလဲပါတာတော့သတိထားမိတယ် မမရေ။
လူအသွားအလာရှင်းသော အချိန်တွင် ဖြစ်ပုံရသည် ။